NASS Elections 2019: Ndigbo agbazị aka n'ọchịchị Naịjrịa? - BBC News Ìgbò
NASS Elections 2019: Ndigbo agbazị aka n'ọchịchị Naịjrịa?
13 Juun 2019
Image copyright Bashir Ahmed
Nwanne ụnyaahụ bụ ụbọchị iri na otu nke ọnwa Juun nke afọ 2019 ka e mechara ntuliaka a ga-eji họpụta ndị ga-achị Naịjirịa n'isi isi dịka ahọpụtara ndị isi Ụlọomeiwu nke ukwu na obele.
Ka ọ kwụ ugbua, 2019 ga-eme ya mbụ ndị si Ọwụwa Anyawụ Naịjirịa esoghị n'ime ndị isi isi a kemgbe Naịjirịa nwere onwe ya site n'aka mba Briten n'afọ 1960.
Nnyocha ebe ndị isi a hụrụkwawa okpu na ngalaba gọọmentị atọ e nwere na Naịjirịa ugbua sI ihe a ga-ahụ bụ:
Onyeisiala: Muhammadụ Buhari - Ọdịda-Anyawụ Ugwu Naịjirịa
Osote Onyeisiala: Yemi Osinbajo - Ọdịda- Anyawụ Ndịda Naịjirịa
Onyeisi Ụlọomeiwu Ukwu: Ahmad Lawan - Ọwụwa Anyanwụ Ugwu Naịjirịa
Osote Onyeisi Ụlọomeiwu Ukwu: Ovie Omo-Agege - Niger-Delta (Ndịdị ndịda Naịjirịa)
Onyeisi Ụlọomeiwu obele: Femi Gbajabiamila - Ọdịda Anyanwụ Naịjirịa
Osote Onyeisi Ụlọomeiwu obele: Ahmad Wase - Etiti Ugwu Naịjirịa
Ọkaikpe Ukwu Naịjirịa: Ibrahim Tanko Muhammad - Ọwụwa Anyanwu Ugwu Naịjirịa
Ụfọdụ mmadụ na-ekwu na ihe o jiri dị otu a bụ makana pati nwere mmeri na ntuliaka 2019 bụ pati na-achị a kpọrọ 'All Progressives Congress' na Bekee ekenyeghị ndị Ọwụwa-Anyanwụ oke ọchịchị n'oge a, n'agbanyeghị na enyere ndị sị mpaghara ahụ tozuru iyi okpu eze n'Ụlọomeiwu abụọ e nwere.
Mmadụ dịka Orji Uzo Kalu pụtara ịzọ osote onyeisi Ụlọomeiwu Ukwu tozuru dịka ọ rụbụrụ ọrụ dịka onyeomeiwu n'afọ 1992 tupu ndị agha batakwa kagbuo nhọputa e mere na 1993.
N'Ụlọomeiwu Nta, Nkiruka Onyeajeocha so zuo ọchịchị tozuru dịka onye so na ndị tọchara n'Ụlọomeiwu Nta.
N'afọ 2015, APC kenyere Ọwụwa-Anyanwụ ohere iwepụta onye ga-abụ onyeisi Ụlọomeiwu, mana ka e mechara ntuliaka, o nweghi onye si pati APC nwetara ọkwa onyeomeiwu Ukwu, nke mere pati ahụ jiri kenye Ugwu Naịjirịa ọkwa ahụ.
Media captionMkparitaụka BBC Igbo na Joe Igbokwe
Ndọrọndọrọ ọchịchị na nkwekọrịta pati anọghị n'ọchịchị bụ Peoples Democratic Party (PDP) na ndi nupuru isi n'ihe pati APC chọrọ nwere wepụtara Ike Ekweremadu - bụ onye Ọwụwa Anyanwụ - ka Osote Onyeisi Ụlọomeiwu ukwu.
Na 2019, Ike Ekweremadu sepụtakwara isi, n'agbanyeghị na ọ nọ na pati anọghị n'ọchịchị, wee zọọ ọkwa ahụ ọzọ mana Ovie Omo-Agege meriri ya.
Ka ọ dị ugbua, ndị mmadụ na-etinye ọnụ n' ọnọdụ ndị Ọwụwa Anyanwụ n'ọchịchị Naịjirịa.
Onye ntakukọ ama ama bu Kadira Ahmed sị n' ọnọdụ ndị Ọwụwa Anyanwụ adịghị mma, ọkachasị ma etinye uche n'ọnọdụ Naịjirịa ugbua.
Image Copyright @KadariaAhmed @KadariaAhmed
Mana onye aha bụ Genevieve Mordi sị na ya e cheghị na ndị Ọwụwa Anyanwụ na-ahụ ọnọdụ ahụ dị ihe na amapụ ha obi makana ha adịghị echekwube gọọmentị.
Image Copyright @GenneyU @GenneyU
Ọnụ na-ekwuru APC na Legọs bụ Joe Igbokwe sị na ihe a mere ekwesịghị ịtụ onye ọbụla si Ọwụwa Anyanwụ n'anya makana ha gbajọrọ pati APC ma kọọ Onyeisiala Buhari ọnụ na gọọmentị ya bụ nke ndị Fulani.
"Kedu ihe ha na-achọzị na patị ndị ọchịehi?" bụ ajuju Maazị Igbokwe jụrụ.
Mana Chuks Iluegbu bụ ọnụ na-ekwuru Ohaneze ekweghị na nke ahụ.
Ọ sị na dịka esi kee Naịjirịa, onye nke a were, onye ọzọ ewere.
Ọ gakwara n'ihu sị na ndọrọndọrọ bu ihe a na-eme dịka okete orie, mana "ka udo dị, e wee werekwa abụghị ihe ọma."
"Aka akawa ahụ, yabụru na ọ bụ sọ otu ka onye Igbo di na pati ha, enye ya ya, ka udo dị."
Media caption2019: E ji Ndigbo eme akaje
Reverend Peace bụ otu n'ime ọnụ na-ekwuru otu na-achọ ka ekewa Naịjirịa tinyere ọnụ n'okwu a were sị na Ndigbo gba aka na Naịjirịa mana ha agbaghị aka.
O kwukwara na ọnọdụ a dị mma iji gosi Ndigbo na o nweghi oke ha nwere na Naịjirịa.
O kwuru: "Ihe a mere ka anyị were chọwa obodo Biafra ma chọsie ya ike."
Onye ọzọ tinyere ọnụ n'okwu a bụ Ọkaiwu Chima Nnaji. Ọ sị na Ndigbo bụ nnu dị na Naịjirịa.
N'ọnụ ya: "I sie nri ma ghara itinye ya nnu, ị gaghị eri ya bụ nri ọkara", ma kwukwa na e sibe ofe ma wepu Ndigbo, na agaghị esicha ya bụ ofe.
Nnaji nyere Ndigbo ndụmọdụ sị ha na onye ajụrụ anaghị ajụ onwe ya.
Fransị agbarala Naịjirịa ụgbọ nwamkpi
Ihe asaa otu EU EOM kwuru gbasara ntuliaka 2019
Mohamed Morsi, aka chịbụrụ Egypt anwụọla